Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) - MAPCO in the News
မောင်တောနယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားပိုင် စပါးခင်းများ ရိတ်သိမ်းရန် လုပ်သားအခက်အခဲကြုံတွေ့
မောင်တောနယ်စပ်ဒေသရှိ ပိုင်ရှင်ရှိသော တိုင်းရင်းသားစပါးခင်းများကို ရိတ်သိမ်းရန် လုပ်သားအခက်အခဲရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား စပါးရိတ်သိမ်းစက်များဖြင့်ရိတ်သိမ်းပေး စေလိုကြောင်း စပါးစိုက်တောင်သူများက ပြောသည်။
ရခိုင်ဒေသတွင် ဒေသစား ဆန်ကြိတ်ခွဲရန် MAPCO က ဆန်စက်ငယ် သုံးစုံ ပို့ဆောင်ထားပြီး စက်တပ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ရခိုင်ဒေသတွင် ဒေသစားဆန်ကြိတ်ခွဲရန် မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း (MAPCO)က ဆန်စက်ငယ် သုံးစုံကို ပို့ဆောင်ထားပြီး စက်တပ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးလှကျော် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
တောင်သူများဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဈေးကွက်ဝင်ဈေးကောင်းရ သီးနှံများ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ရေး နှင့် သီးနှံအရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးတို့အတွက် နည်းပညာနှင့်အကြံဥာဏ်များ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် က ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် အမှတ် ၃၆ စက်မှုလယ်ယာ ရှေ့တန်းစခန်းစိုက်ကွင်း ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ဒေသခံတောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးလှကျော်က ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယ၀န်ကြီးနှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းမင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန တို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ဒေသခံတောင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
A MODERN rice mill andabiomass power plant that burns rice husks to generate electricity were opened in Kyaiklat in Ayeyawady Region yesterday, with Vice-President U Henry Van Thio in attendance. U Henry Van Thio, who is also the chairman of the leading committee for the protection of farmers' rights, unveiled the signboard of the MAPCO Golden Lace rice mill and biomass power plant. Present at the opening ceremony were Dr Than Myint, Union Minister for Commerce, U Hla Kyaw, Deputy Minister for Agriculture, Livestock and Irrigation, Dr Htun Naing, Deputy Minister for Electricity and Energy and Mahn Jonny, Chief Minister of Ayeyawady Region. The Modern rice mill contains storage rooms, silos, andahusk-fired 2.2 megawatt power plant.
နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ-ဂျပန် ပူးပေါင်းမှုဖြင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိသော စပါးခွံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရေးစက်ရုံ မေလအပြီးဆောင်ရွက်မည်
နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ-ဂျပန် ပူးပေါင်းမှုဖြင့် MAPCO ၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ တည်ဆောက်လျက်ရှိသော စပါးခွံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရေးစက်ရုံကို ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလအပြီးဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) မှ သိရသည်။